The Irrawaddy's Blog: လားရှိုးသိန်းအောင် တကိုယ်တော် ဂီတပွဲမြင်ကွင်း
လားရှိုးသိန်းအောင် တကိုယ်တော် ဂီတပွဲမြင်ကွင်း
မြန်မာပြည်ကို ခေတ္တပြန်လည်ပတ်ရောက်နေတဲ့ နာမည်ကြီး အဆိုတော် တဦးဖြစ်တဲ့ လားရှိုးသိန်းအောင်ရဲ့ တကိုယ်တော် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ မင်းဓမ္မလမ်းရှိ MCC မှာ ယမန်နေ့ည ယခုည ၈ နာရီက စတင်ပြီး ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ - ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ
လားရှိုးသိန်းအောင် ခေါ် jimmy ဟာ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်ကြာမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာ တာဖြစ်ပါတယ်။
ဖျော်ဖြေပွဲဟာ စည်းကားသိုက်မြိုက်ပြီး တချိန်က သီချင်းဟောင်းတွေလည်း သီဆိုခဲ့ပါတယ်။
Posted in: JPaing , အနုပညာ ရပ်ဝန်း
sonny said... :
there wasastage show performed in 127th street, kan daw kalay, mingalar town nyunt about 40 years ago when i was 12-13. it was the first time and last i saw jimmy jack. I don't remember the band name. It might be playboy or 6064.
ပြန်လာတုံးကတော. မြန်မာပြည်ကိုသတိရလို.ပါ ၊ နိုင်ငံသားတွေကို ကူညီချင်လို.ပါ ၊ တတ်နိုင်တဲ.ဖက်က အကျိုးပြုချင်လို.ပါလို.ပြောကြပြီး ၊ ရှိုးပွဲတွေလုပ် ၊ ပိုက်ဆံတွေညာယူနေကြတဲ.သူတွေပဲ တွေ.နေရတယ်။ ဘယ်သူမှတိုင်းပြည်နဲ.လူမျိုးကို အကျိုးရှိအောင်လုပ်တာ မရှိတာလဲ ?
song crazy said... :
Great singing! Congratulation!
Artist can do things concerned with art!
Can u do things good for your country,anonymous?behave yourself.
January 20, 2013 at 1:16 PM Reply
ပြန်လာတုံးကတော. မြန်မာပြည်ကိုသတိရလို.ပါ ၊ နိုင်ငံသားတွေကို ကူညီချင်လို.ပါ ၊ တတ်နိုင်တဲ.ဖက်က အကျိုးပြုချင်လို.ပါလို.ပြောကြပြီး ၊ ရှိုးပွဲတွေလုပ် ၊ ပိုက်ဆံတွေညာယူနေကြတဲ.သူတွေပဲ တွေ.နေရတယ်။ ဘယ်သူမှတိုင်းပြည်နဲ.လူမျိုးကို အကျိုးရှိအောင်လုပ်တာ မရှိဘူးတဲ့။
ရန်ကုန်ရောက်လို့ လေဆိပ်က ထွက်တာနဲ့ နှာစီးသွားတာသာကြည့်။
အ ကောင်းမြင် တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပါဗျာ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကောင်းအောင် အရင် လုပ်ဖို့အ ရေးကြီးပါတယ်။